China Manzi Ikhebula Assembly, DC Isixhumi ifektri abakhiqizi | Olink
ikhebula lenhlangano elingangenwa manzi
Inombolo Yemodeli: Izikebhe zocingo zezimoto 66
Amandla: 1.5 USD
MOQ: 20 * 20 * 10 Amasentimitha
I-Wire Harness Design
Ihanisi yocingo ngokuvamile yakhelwe ukwenza lula ukwenziwa kwengxenye enkulu, futhi yakhelwe ngokuya ngezidingo zejometri kanye nezikagesi zomshini okufanele ufakwe kuwo.
Izintambo zokubopha izintambo zivame ukusetshenziswa embonini ye-elekthronikhi, embonini yezimoto, ekwakheni imishini yokwakha nemishini yezimboni, kanye nasekwakhiweni kwempahla emhlophe efana nemishini yokuwasha kanye nokomisa impahla, iziqandisi nezinye izinto zasendlini.
Amahhanisi entambo enza lula ukwakhiwa kwalezi zinto ezinkulu ngokuhlanganisa i-wiring iyunithi eyodwa, noma amayunithi amaningana, ekufakweni kwe- "drop-in". Ngokubopha izintambo eziningi, amakhebuli, nama-subassemblies abe yihhanisi, i-OEM noma isifaki inento eyodwa kuphela engayifaka. Ngaphezu kwalokho, i-harness ye-wire ivumela umhlangano ophelile ukuthi uvikeleke kangcono emiphumeleni yokuhuzuka nokudlidlizela, nangokucindezela izintambo zibe yinqwaba engeyona eguquguqukayo, ukusetshenziswa kwesikhala kuthuthukisiwe.
Lapho nje sekusungulwe idizayini, inqubo yokwakhiwa kwamahhanisi ocingo iqala ngokwakhiwa kohlelo olusetshenziselwa ukudala amaphepha okukhiqiza kanye nebhodi lomhlangano lehhanisi. Ibhodi lomhlangano, noma ibhodi lephini, lingumdwebo osayizi ogcwele wehhanisi futhi likhombisa zonke izinto nendawo elikuyo futhi lisebenza njengebhentshi lomsebenzi wehhanisi. Izintambo ezidingekayo ukuze kufakwe amahhanisi zihlinzekwa ku-master reel futhi zisikwa kubude obufunwayo futhi zikhonjwe ngokuphrinta noma ukufaka ilebula uma kunesidingo. Uma isikwe ebangeni elifanele, izintambo ziyahlulwa ukuze kuvezwe umqhubi ongavinjelwe bese zifakwa noma yimaphi amatheminali adingekayo noma izindlu zokuxhuma. Lezi zintambo nezingxenye zakhona zifakwa ebhodini lephini futhi zihlanganiswa yinoma yimiphi imichilo edingekayo, izintambo zekhebula, izintambo zekhebula, imikhono, amateyipu, izixhumi zentambo ekhishiwe, noma enye inhlanganisela yalokhu.
Ngaphandle kwesifiso sokwandisa i-automation, ama-wire harnesses, ngokuvamile, aqhubeka nokwenziwa ngesandla ngenxa yezinqubo eziningi ezahlukahlukene ezithintekayo.
Langaphambilini Ikhebula le-Cable Manzi, Isixhumi se-DB 24pin
Olandelayo: Isixhumi Manzi Ukuze DC Ikhebula
Ikhebula Assembly For Izithuthi
Ikhebula Assembly For Electronics
Ikhebula Assembly For Home Zikagesi
Umhlangano Wentambo Yomthengi